Degdeg: Wafdi uu Hogaaminaayo Xildhibaan Magan oo Gaaray Magalada Kismaayo – Gedo Times
Degdeg: Wafdi uu Hogaaminaayo Xildhibaan Magan oo Gaaray Magalada Kismaayo
9th March 2016 admin Wararka Maanta 9
Wafi balaaran oo ka kooban xildhibaano iyo Siyaasiyiin ayaa Maanta galinki Dambe gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose.
Wafdiga waxaa Hogaaminaya Xildhibaan Maxamuud Cali magan,waxaana qeyb ka ah Xildhibaan Cabdirashiid Suufi Deerow iyo Mudanayaal kale, sidoo kale siaasiyiin iyo waxgarad ayaa qeyb ka ahaa Wafdiga Xildhibaanka.
Magan oo garoonka Kismaayo Warfdiyeenada kula hadlay ayaa sheegay in ujeedka safarkooda uu yahay in ay amrqaati ka noqdaan wadahadalada dhawaan dhexmari doona ergada beesha Sade iyo Hogaamiyaha Mamaulka Jubba Axmed Madoobe.
‘Waxaan u nimid kismaayo inaan goobjoog ka noqono shirka kismaayo dhawaan ka furmaya ee u dhaxeeya beesha Sade o omideysan iyo Hogaamiyaha Mamaulka Jubba Axmed Madoobe,kismaayo oon muddo ka amqnaa waa ku furaxasanhay inaan dib ugu soo laabto ayu uyiri xildhibaan Magan oo Wafdigani codkooda ku hadlayay.
Magan ayaa ahaa Xildhibaankii ugu mucaarada adkaa Mudanayaasha baarlamaanka marka loo eego maamulka Jubba,lamana oga waxa siyaasadda jubaland ay ka abdali doonto socdaalka isaga iyo wafdigiisa ee Kismaayo.
Muddo usbuuc kusiman waxa ahalkaasi ku sugan Siyaasiyiin,waxgarad iyo aqoonyahanno uu horuud u yahay Wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini.
Daawo:Soomaali Lagu Dilay Dalka Koonfur Africa
XOG: Beesha Sade oo Midowday iyo Qodobo Masiiri ah oo ay si wadajir ah u soo saareen, “Akhriso”